Tontolo Iainana: Ireo Fanambin’i Shina miala amin’ny Loto ka hatrany amin’ny Tafiodrivotra Mahery · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Avrily 2018 19:57 GMT
Ilay Nofy Amerikana (tsy mety tanteraka): “Manondrana loto”
Nahita fahombiazana maro tao an-toerana ihany ny hetsika ara-tontolo iainana tany amin'ireo firenena tandrefana tao anatin'ny folo taona mahery lasa izay. Voafehy ny fandotoana ny rivotra sy ny rano, ary voatahiry ny faritra maitso, saingy mbola any amin'ny faritra misy ny sokajy antenantenany anatin'ireny firenena ireny ihany izany. Tsy voavaha ny ankamaroan'ireo olana fa afindra toerana fotsiny. Matetika ohatra dia alefa mankany amin'ny faritra mahantra ao amin'ilay firenena ireny orinasa mpandoto ireny, ary aondrana (indraindray tsy ara-dalàna) any amin’ny firenena ivelany tahaka an'i Shina sy India ny fako avy amin'ny fitaovana elektrônika.
Mila manontany isika raha tena hahavaha ny olana tokoa ny fanondranana ny loto. Zavamisy eran'izao tontolo izao ny famoahana entona miteraka fihafanan'ny tany ary tsy afaka alefa any ivelany: planeta iray ihany no iainantsika rehetra. Tamin'ny tapany voalohan'ny taona 2007 ohatra, namindra orinasa 200 tany amin’ny sisin'ny tanàna i Beijing, na tany aminà tanàna hafa mihitsy. Maro ireo tanàna tsy mifehy ny fahalotoan'ny rano fa maka rano avy any lavitra dia lavitra, ary manitatra ny lakandrano mba hanariany ny rano malotony eny lavitra eny. Araka ny nolazain’ilay mponina iray avy ambanivohitra tamiko hoe: “Raha loto ny ao an-drenivohitra, dia mbola loto koa ny aty ambanivohitra.”
Fanakarana ny toetrandro tafahoatra any Shina: “Inona avy ireo lesona azon'i Shina tsoahina amin'ireto tranganà toetrandro tafahoatra izay toa mihahita matetika ireto?”
Ny fahitàna ny mety hampisy sy hahalafo ny vidin'ny fiovan’ny toetrandro no lesona manan-danja indrindra azon’i Shina tsoahana amin'ity toejavatra ity. Marina tokoa fa i Amerika sy i Eoropa no tompon'andraikitra amin'ny famoahana ny ankamaroan'ny entona mitarika fihafanan'ny tany amin'izao fotoana izao. Na izany aza anefa, raha izao làlam-pandrosoana raisin’i Shina ankehitriny izao, dia izy no ho mpandray anjara lehibe indrindra amin'ny famoahana entona mitarika fihafanan'ny tany amin'ny rivotra iainana rehefa kelikely eo ary ho lasa mpandray anjara goavana indrindra amin'ireo fiantraikany izay mbola azo hialàna amin'ny hoavy. Zava-dehibe ho an'i Shina, noho izany, ny fahatakarany ireo marimaritra iraisana misy aminà làlam-mpandrosoana ara-toekarena raisiny rehetra amin'ny hoavy. Mety azo raisina ho toy ny làlana manafaingana indrindra ny fitomboana ara-toekarena ankehitriny ny toekarena mifototra amin’ny karbôna, saingy mety hitera-doza tsy ampoizina amin’ny toekarena ny fiovan'ny toetrandro ho avy eo.
Namoaka Lahatsary fohy i Tim Hurst avy amin'ny ecopolitology, mitondra ny lohateny: State of Resolve (Fanjakan'ny Fanapahankevitra)
“manasongadina ny pôlitikan'ny tontolo iainana somary liam-pivoaran'i Kalifôrnia ity lahatsary fohy navoakan'ny haino amanjerim-panjakana ity ary mampivady izany amin'ny (tsy fahampian’ny) pôlitika *federalintsika. Vitan'ity lahatsary vokatra tsara ity ihany koa ny nampifandray ny fironantsika makany amin’ny harena ara-pitaovana ho mpandray anjara amin'ny fandotoana ny tontolo iainana any Shina”
*Etazonia ilay “isika” eto